Uloyiko lweWuhan Coronavirus luya kwiimarike zemali | Ezezimali
Uloyiko lweWuhan Coronavirus luya kwiimarike zezemali
IClaudi Casal | | I ngxaki, Izaziso
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, akukho mntu wayesazi ukuba yintoni, kwaye ngoku iWuhan Coronavirus iba yenye yezihloko eziphambili zosuku. Ukubonakala kwayo okungaqhelekanga kunye nokukhawuleza kubeke abasemagunyeni baseTshayina kunye nehlabathi liphela. Lonke oluvalo luchaphazele iimarike zestokhwe kwihlabathi liphela, ngeendaba nganye ezivelayo. Ngaba i-Coronavirus iyinyani yokwesaba ubhubhane? Kutheni le nto iimarike zentengiso zibandezeleka ngenxa yokuhla kweentsuku ezimbalwa ezidlulileyo? Ngaba ukwehla kwemirhumo kunxulumene nesi sifo sitsha?
Sonke silinde ukuvela kobhubhane, kwaye kunjalo ukusasazeka kwayo kukhawuleza kakhulu. Nangona kungaziwa kangako malunga nendalo, abasemagunyeni baye emsebenzini ukumisa ukuqhubela phambili. Yiyo loo nto imiqondiso yokuqala iqala ukubonwa ukuba iyayiqonda indlela esebenza ngayo, kwaye ngenxa yoko ikwazi ukuthatha amanyathelo olawulo angcono. Uloyiko, nangona kunjalo, luza ngeli xesha kwiimeko ezijikeleze iCoronavirus, kwaye ngaphezulu kwako konke ukusuka kwindawo eyenzekileyo kwaye nini ingqamana nonyaka omtsha wase China. Ingumzuzu nje apho kukho izigidi ezininzi zokufuduka kuzwelonke nakwamanye amazwe. Ubhubhane olunendalo elenza lahluke ngeli xesha.
1 Yintoni iWuhan Coronavirus?
1.1 Ukuzivelela nokwanda kwesifo
2 Ngawaphi amacandelo enzakala kakhulu?
3 Yintoni onokuyilindela kwimpembelelo yeCoronavirus kwiimarike?
Yintoni iWuhan Coronavirus?
I-Wuhan Coronavirus yeyosapho lweCoronavirus, iqela elikhulu leentsholongwane zeRNA ezinemvulophu eqhelekileyo yentsholongwane. Ukuza kuthi ga ngoku zingama-39 iindidi ezahlukeneyo zeCoronavirus, Ngeentlobo ezahlukeneyo zosulelo kuxhomekeke koluphi. Abanye baneempawu eziqatha njengokubanda okuqhelekileyo, abanye abafana ne-bronchitis, i-bronchiolitis, i-pneumonia, i-Middle East syndrome yokuphefumula (eyaziwa ngokuba yi-MERS-CoV) okanye isifo se-SARS-CoV.
IWuhan Coronavirus (2019-nCoV), isikhumbuza kakhulu ubhubhane weSARS ka-2002-2003. U-Arnau Fontanet, intloko yesebe le-epidemiology ePasteur Institute eParis, uthe intsholongwane entsha ye-2019-nCoV yi-80% yemfuza elingana ne-SARS. Olu thelekiso lukhokelele kwisigqibo sokuba mhlawumbi ingalutshintsho lwe-SARS.
Ukongeza, kwathiwa izolo yayinophawu lokuba iyosulela nangaphambi kokuba iimpawu ziqale ukubonisa. Nangona kunjalo, kutsha nje kuyaliwe, enika i-aura yokungazi okuthile kunye nesifundo esiqhubekayo sokuqonda ukusebenza kwesi sifo.
Ukuzivelela nokwanda kwesifo
Kukho iinkxalabo ezinokuthi zisasazeke kwinqanaba lehlabathi, ukuba i-China ayinakuqulatha intsholongwane kwaye ibangele ubhubhane. Ukuqonda ubungakanani bento, jonga nje idatha efumaneka imihla ngemihla. Phakathi kwezona zichaphazelekayo, oku kulandelayo kufuneka kugxininiswe:
Inani lamatyala aqinisekisiweyo anyuke ngeveki ukusuka kwi-220 ukuya kwi-2.850. Ukuphinda-phinda ngo-13. Lo ibingumhla wayizolo, ngoMvulo, nge-27 kaJanuwari, okwangoku namhlanje, ngowama-28, ngexesha lokubhalwa kwale migca, besekusele kukho abangama-4.500 XNUMX abasulelekileyo.
Inani lokusweleka kwabantu ababhalisiweyo lisuke kwi-3 laya kuma-81 ngeveki. Ukuphindaphinda ngamatyeli angaphezulu kwama-25. Oku nge-27 kaJanuwari, namhlanje ngoLwesibini we-28, inani labaswelekileyo abali-106 labhengezwa, ngama-25 ngaphezulu kwayizolo. Inani lokugqibela labantu abaphilisiweyo lineminyaka engama-60.
I-WHO izolo iyilungisile ingxelo apho iphakamise umngcipheko wamazwe aphesheya ukusuka "kumodareyitha" ukuya "phezulu". Kwinqanaba lesizwe lase China, umngcipheko wokulinganiswa "uphezulu kakhulu".
Kukho iimeko ezingama-44 ezibhaliweyo ngaphandle kwe China yabantu abafumene esi sifo. Phakathi kwamazwe ahlukeneyo sifumana iSingapore, iFransi, iJamani, iOstreliya, iThailand, iMalaysia, iSouth Korea, iJapan, iUnited States, iVietnam, iNepal neCanada.
Umongameli wase-USA, UDonald Trump wathumela umyalezo ngetwitter izolo ngoncedo olunikwa i-China Ukuqulatha intsholongwane.
Ngawaphi amacandelo enzakala kakhulu?
Ukunikezelwa ngamanyathelo okuqulatha ubhubhane owamkelwa ngoorhulumente, iinkampani ezahlukeneyo ziqala ukubhalisa ukwehla okunamandla kwimarike yemasheya. Abatyalomali, beqhutywa luloyiko lwendaleko enokuthi i-Wuhan Coronavirus igqibe ukuba nayo, baphalaza ngokukhawuleza izabelo. Phakathi kwamacandelo achaphazelekayo esiwafumanayo iihotele, iihotele eziphambili, iinqwelomoya, kunye nezinto ezithile eziluhlaza. Ukuba akunjalo, konke ukubandezeleka ngokubanzi kuyehla, ezona zibhengeziweyo sinokuzifumana phakathi kwezo zikhankanywe ngaphambili.
Ukudodobala kwezoqoqosho esele iqalile ukuqatshelwa, kudluliselwa kula macandelo. IMeliá, neehotele zayo ezi-5 ezisebenza e-China, ibonakalise ukuba ukuhlala kwayo kuphantsi, ngelixa izabelo zayo zibhalise ukuhla nge-5% izolo. Kwelinye icala, Iinqwelo-moya ziyaqhubeka namhlanje ngokuhla, ngokumodareyitha okuthe kratya xa kuthelekiswa nomhla omnyama abahlupheke ngawo izolo. Iinkampani ezinje nge-IAG ziyavuma ukuba zenze iirhafu zeenqwelo moya zeIberia eziya eShanghai zibhetyebhetye.
Yintoni onokuyilindela kwimpembelelo yeCoronavirus kwiimarike?
Iingcali ezahlukeneyo kunye nabahlalutyi bezemali bafuna ukukugxininisa oko ifuthe kuqoqosho alunakulindeleka. Ngaphandle kwesi sizathu, kukho iiasethi ezahlukeneyo ngendalo yazo ezinokuthi zisebenze ngcono, ezinje ngombane okanye amayeza. Kwakhona iiasethi ezikhuselekileyo, ezinjengeGolide kunye neSilivere, zenza ukonyuka okuthile ngenxa yenkunzi leyo ethatha inzuzo kwaye ifuna indawo yokusabela. Kwaye kukuba masingakulibali Kukho umndilili omkhulu wokunyuka phezulu kwiinyanga ezidlulileyo. Amakethi kwiindawo eziphakamileyo zembali kwimeko ye-USA okanye iindawo eziphakamileyo zonyaka kwimeko yeYurophu.
Amanqanaba apho amaxabiso afikelele khona, ngokufuna okuphindaphindwayo, aphezulu ngokwaneleyo ukuze nakuphi na ukubakho kwesiphumo kube nesiphumo esibonakalayo kwiimarike.
Kuya kufuneka silinde ukubona indaleko kunye nendlela esijamelene ngayo nesi sifo. Ukuqala ukuthatha izikhundla koku kunokuba kukuzithoba, kwaye emva koko ungxame. Ukuqhubela phambili kwezi meko kufuna ulindelo olukhulu kunye namandla okuphendula. Ngokunjalo, iingcali ezahlukeneyo kunye nabahlalutyi baye bakhumbula nangexesha elidlulileyo xa ezinye iintsholongwane zavela, ezinje ngeSARS, nje ukuba zilawulwe, kwabakho ukubuyiswa okuhle kwimarike yesitokhwe. Okwangoku, ukubuya, abanye babo bakhumbula ukuba isitokhwe siwile njani kwiinyanga ezimbalwa ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Izaziso » Uloyiko lweWuhan Coronavirus luya kwiimarike zezemali